Welcome to Aayaha Nolosha » C/CASIIS XILDHIBAAN “11-BILOOD AYAAN DOWLADDA U SHAQEYNAYAA WAX MUSHAAR AHNA KAMA HELO, ILMAHAYGANA WAXAA BIISHA BOQORADDA….”
C/CASIIS XILDHIBAAN “11-BILOOD AYAAN DOWLADDA U SHAQEYNAYAA WAX MUSHAAR AHNA KAMA HELO, ILMAHAYGANA WAXAA BIISHA BOQORADDA….”
“Waxaan ahay Aabe 13 carruur dhalay, waxaan muddo 11-bilood ah u shaqeynayaa dowladda, wax mushaar ahna weligey la ima siinin, ilmahaygana biil ugama helo dowladda oo waxaa biila boqoradda Ingiriiska” sidaas waxaa yiri Afhayeenka Wasaaradda Amniga Qaranka ee Xukuumadda Federalka Soomaaliya C/casiis Cali Ibraahim (Xildhibaan) oo ka hadlayay xaflad maanta ka dhacday magaalada Muqdisho.
“Sababta aan u doortay inaan dowladda u shaqeeyo, isla markaana aan ilmahayga oo ku nool dalka Ingiriiskana uga soo tago anigoo weliba aan wax mushaar ah qaadan waxay ahayd inaan Ilmahayga baro inay dal iyo dowlad leeyihiin, balse dhinacayga ma jirto wax biil ah oo ay ka helaan oo boqoradda Ingiriiska ayaa biilaysa xitaa haddii aan dhinto” ayuu yiri C/casiis Xildhibaan.
Waxa uu intaasi ku daray inay Ummadda ka daaleen raalli-gelinta madaxda dowladda, mana jiro mas’uul isku casilay fashil ka dhashay xilkiisa.
Siyaasiyiinta Soomaalida waa tuugo aan waxba qabanin oo Boorsooyin waaweyn ayay buuxsadaan ayuu yiri.
“Siyaasi danno gaar ah leh in beentiisa la dhegeysto, loona sacab-tumo ma aha, mana aha in loo riyaaqo ballanqaadyada beenta ah ee ay ku dhawaaqaan marka ay xafladaha iyo shirarka ka hadlayaan” ayuu yiri Afhayeenka Wasaaradda Amniga Qaranka ee Xukuumadda Federalka Soomaaliya.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Qaranka ee Xukuumadda Federalka Somalia. C/casiis Cali Ibraahim “Xildhibaan” waxa uu si kulul uga hadlay qaabka ay ku suurto-gashay inay Al-shabaab ka gudbaan Kontoroolka ammaanka ee Isgoyska Sayidka, una weeraraan xarumo muhim u ah dowladda, isagoo xusay in lagu guul-daraystay ballanqaadkii sugidda ammaanka.
“Suurto-gal ma aha inay Al-shabaab si fudud uga gudbaan Kontoroolka, iyadoo la og yahay in Hooyada foosha haysa iyo Ardayda loo diido inay ka gudbaan waddooyinka” ayuu yiri Afhayeenka, oo intaasi ku daray in loo baahan yahay inay Jenraaladda ka tirsan ciidamada dalka ka hadlaan sida looga soo gudbay koontoroolka Zoonka 1-aad ee Isgoyska Sayidka.
Afhayeenka waxa kale oo uu eed u jeediyey madaxda dowladda, isagoo tilmaamay in lagu fashilmay ballanqaadkii ammaanka ee loo sheegay shacbiga Soomaaliyeed.
Hadalka afhayeenka Wasaaradda Amniga Qaranka waxa uu ku soo beegmay iyadoo ay Al-shabaab shalay si fudud uga tallaabeen koontaroolkii ugu adkaa ee yaalay Zayidka, una weerareen Xarunta Wasaaradaha Amiga iyo Amniga Gudaha oo ku taala dhismaha Otto-Otto oo u dhow Isgosyka Sayidka ee magaalada Muqdisho.